၁၀ ၂၀၂၁ ဖြစ်စဉ်
၁၁ အမှတ်တရ ထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်
ပုဂံခေတ်တစ်လျောက်လုံးတွင် ချောင်းဦးမြို့သည် အချက်အချာကျ၍ အရေးပါသော ထောင်စုပြမြို့အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ထောင်ပြုရွာအဖြစ်လည်းကောင်း တည်ရှိခဲ့သည်။ ကျစွာမင်း ငယ်စဉ်ဘဝ မယ်တော်နှင့်အတူ မင်းဘေးမင်းဒဏ်ရှောင်တိမ်း၊ ပြေးပုန်းရစဉ်က ချောင်းဦးမြို့တောင်ဘက် သမန္ဓဇ(သမံဓဇ)ကျောင်းဆရာတော်ထံတွင် နေထိုင်ပုန်းအောင်းခဲ့ကြရပြီး၊ သမံဓဇဘုရားကြီးကို မယ်တော်က သင်္ကန်းရက်လုပ်ပူဇော်လျက် အဓိဋ္ဌာန်ပြုဆုတောင်းခဲ့ရာ ကျစွာမင်းတို့သားအမိ ပုဂံပြည်သို့ပြန်ရောက်ပြီး ကျစွာမင်း မင်းအဖြစ်သို့ရောက်သောအခါ ဘုရားကြီးကို ကြီးစွာသောပူဇော်သက္ကာရများ ပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့သည်။ ယခုတိုင် ကျောက်စာနှင့်တကွ အထင်အရှားဖူးမြော်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပုဂံခေတ်နှောင်းပိုင်း နရသီဟပတေ့မင်းက ချောင်းဦးမြို့ရှိ ရွှေဂူကြီးဘုရားတွင် ခြင်္သေ့ရုပ်များထုလုပ်စေခဲ့ရာတွင် ရွှေဂူကြီးဘုရားကို နဂါးစောင့်သဖြင့် ခြင်္သေ့ရုပ်တုလုပ်ထားရှိသည့် အစီအစဉ်ပျက်ပြားခဲ့ရကြောင်း ပါးစပ်ရာဇဝင်များလည်း ရှိနေပေသေးသည်။ ဘုရားကြီး၏ဂန္ဓကုဋီတိုက်တော် ထောင့်လေးထောင့်တွင် နဂါးလေးကောင်ကိုပါ တွဲစပ်လျက် တည်ဆောက်ထားသည်မှာ ၎င်းအဓိပ္ပာယ်၏ သင်္ကေတပြယုဂ်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုကြသည်။
၂၀၂၁ ခု၊ မတ်လ ၁၆ ရက်တွင် အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေး ညသပိတ်ပြုလုပ်ရာ စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲ၍ ၂ ဦး သေသည်။ 
↑ "ချောင်းဦး ညသပိတ် ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲခံရ၊ နှစ်ဦးသေဆုံး". RFA Burmese. 2021-03-16.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချောင်းဦးမြို့&oldid=703171" မှ ရယူရန်